दशैं सांस्कृतिक पर्व हो | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / दशैं सांस्कृतिक पर्व हो
दशैं सांस्कृतिक पर्व हो
Posted by: युगबोध in विचार October 10, 2018	0 196 Views
दशै ं मनाउने परम्पराको शुरुवातबारे ने पालका समाजशास् त्री, संस् कृतिविद् र इतिहासकारहरुका भिन्न–भिन्न दृष्टिको णहरु छन् । कसै ले यसको विशुद्ध धार्मिक को णबाट व्याख्या–विश्ले षण गनेर् गरे का छन् भने कसै ले शासक वर्गको वीरता, सौ र्य आदिको प्रशंसा गनेर् उद्दे श्यले यसको थालनी भएको हो भन्दै आएका छन् । अझै कसै ले त यो मातृसत्ताको अवशे षका रुपमा रहे को पर्व हो भन्ने पनि गरे का छन् । यो मूलतः किसान जनसमुदायसित सम्बन्धित सबै भन्दा पुरानो चाड हो  । असार–साउनको खे तीपाती सकिएपछि प्राकृतिक मौ समको अनुकूलतामा यो चाड मनाइन्छ । किसानले खे तीपाती गरिसके पछि फुर्सदको समयमा आमो द–प्रमो द गनेर् चलन चले को हुनुपर्छ र त्यसले नै पछि दशै ंको रुप लिएको हुनुपर्छ ।
हामी ने पाली प्रकृतिप्रे मी हांै  । ने पालका विविध जातजातिका किसानको चाडका रुपमा प्रचलित दशै ंलाई हिन्दू धर्मबाट अभिप्रे रित शासक वर्गले आफ्नो संस्कृति बनाएर सामन्ती संस्कार एवं चाडको रुप दिएको हुनुपर्छ । कृषिप्रधान क्षे त्रका जनताले विश्रामको आवश्यकता अनुभव गरे र यसको चलन चलाएका हुन् भन्ने तर्क धार्मिक र सामन्ती तर्कभन्दा धे रै गहन र दरिलो तर्क हो  । यो नितान्त वर्ष दिनको कामकाज र खे तीपाती सके र थकाइ मानेर् किसानको आवश्यकताबाट विकसित चाड हो  । शासक वर्गले यस चाडलाई पछि रुपान्तरित गरे र आफ्नो स् वार्थअनुकूल धार्मिक रुप दिने प्रयत्न गरे पछि मात्र सत्यमाथि असत्यको वा आसुरी शक्तिमाथि दै वी शक्तिको विजयका रुपमा दशै ंको उत्पत्ति भएको हो भन्ने दृष्टिको ण विकसित गरिएको हो  । यसमा शासकवर्गको वर्गीय स् वार्थ र चालबाजी नै प्रतिबिम्बित भएको छ । त्यसलाई हटाएर हे र्दा यो विशुद्ध लो कसंस् कृतिसित सम्बन्धित चाड हो  ।
दशै ंका नौ दिनमा वा दुर्गाका पूजासामग्रीका रुपमा धानका बो ट, उखु, अदुवा र जमरा आदि प्रयो गमा आउ“छ । दशै ंमा घटस् थापनाका दिन जौ र मकै का बीउ छनेर् , नौ दिनसम्म एक वर्षदे खि क्रमशः नौ वर्षसम्मका के टीहरुको पूजा गनेर् , दशौ ं दिन उमारिएका जमरा लगाउने र मान्यजनबाट आशीर्वादस् वरुप दहीमा मुछे र चामलको टीका लगाउने र दही, के रा र चिउरा मुछे र खाने जुन परम्परा दशै ंमा चलिआएको छ, त्यसले सम्बन्धित उत्सव वा चाडका रुपमै स् थापित गर्छ । पछि, शासक वर्गले यसमा काटमार गनेर् चलन थपे को हुनुपर्छ । यसरी विविध जातजातिका किसानको चाडका रुपमा प्रचलित लो कपरम्परालाई हिन्दू धर्मबाट अभिप्रे रित शासक वर्गले आफ्नो संस् कृति बनाएर सामन्ती संस् कार एवं चाडको रुप दिएको हुनुपर्छ ।
चाहे जुनसुकै कारणले दशंै को चाड मनाउ“दै आए पनि हामी ने पालीहरुले मान्ने चाडमध्ये प्रमुख चाडपर्वको रुपमा दशंै पर्व पर्दछ । विशे ष गरे र हिन्दूधर्म मान्ने हरुले यो पर्वलाई धर्म संस् कृति र परम्पराको रुपमा मनाउदै आएका छन् । दशै पर्व नजिकै आएको हु“दा यस ले खमा दशै ंको बारे मा चर्चा गरिएको छ । असत्यमाथि सत्यको विजयका रुपमा मनाउन शुरु गरिएको दशंै के ही वर्षयता आफ्नो आर्थिक है सियत बिसेर् र अरु घो डा चढे भने र आफू धुरी चढ्ने प्रबृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा दशै ं पर्व उल्लास र उमंगको चाड हुन सके को छै न । जुन कारणले गर्दा दशै ं दशा भएर आउने र जाने गरे को छ । दशंै पर्वलाई सांस् कृतिक महत्वको चाडका रुपमा मनाएको पाइन्न । दशंै को गरिमा बृद्धि हुने गरी विशुद्ध मनो रञ्जनात्मकरुपमा मनाउनु पनेर् मा त्यसो हुन सके को छै न । दशंै लाई घा“टी हे री हाड निल्नु भन्ने उखानलाई हृदयंगम गरी मनाउन सकियो भने मात्रै दशै ं पर्व सा“च्चिकै दशै बन्न सक्छ । अहिले खाद्य, लत्ता कपडा, मासु आदि वस् तुहरुमा छाएको महंगी त्यसमाथि मिसावटयुक्त पदार्थ उपभो ग गर्न बाध्य ने पालीहरुले अभावका बावजुद पनि दशंै लाई आफ्नो है सियत अनुसार मनाउने तर्फ सबै ले सो च्नुपर्दछ ।
दशंै पर्वमा ने पालीको ऐ तिहासिक संस् कृति र धर्म जो डिएको पनि छ । हाम्रो शास् त्रमा उल्ले ख भए अनुसार दशै ंपर्वको प्रसंग राम र रावणको युद्धमा जो डिएको छ । राम र रावणको लडाइ“मा रामले रावणलाई युद्धमा मारे पछि विजयको खुशियालीमा यो पर्वको शुरुवात भएको धार्मिक कथन छ । घटस्थापनादे खिनै हिन्दूहरुले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा दुर्गा सप्त शनि, चण्डी र भगवतीको स् त्रो त पाठ गरी दशंै पर्वको शुरुवात हुने गर्दछ । विशे ष गरी दशंै पर्वमा विभिन्न शक्तिपीठ र दुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । परम्परागत दशंै पर्वमा खड्गयात्रा र पूजाको प्रचलन भएकाले यो पर्व ने पालमा तन्त्र यानको प्रादुर्भाव भएदे खिनै भएको हो भन्ने तर्क एकथरि विद्वानहरुको छ । तर इतिहासले भने राजा हरिसिंह दे वले ने पाल सम्वत ४४४ अर्थात आजभन्दा ६९० वर्ष पहिले तुलजा भवानीसमे त लिएर ने पाल प्रवे श गरी उपत्यकामा राज्य सञ्चालन गनेर् क्रममा दशै ंको पर्व शुरु भएको भन्ने पनि छ । दे वी पुराण धर्मग्रन्थमा उल्ले ख भए अनुसार सत्ययुगमा दे वासुर संग्राम भएदे खि नै दशै ं पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक मान्यता पनि रहे को छ ।
चाहे जे जसरी पर्वको शुरुवात भए पनि परम्परागतरुपमा मनाउदै आएको दशै ं पर्व आज पनि हिन्दू समाजमा उत्तिकै लो कप्रिय चाडका रुपमा मनाउ“दै आइएको छ । असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सव मानी शुरु भएको दशै ं पर्व पछिल्ला दिनमा दे वीलाई बलि दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता लिई दशै ं पर्वमा लाखांै पशुपंक्षीहरुलाई शक्तिपीठ मानिएका दे वीदे वताको मन्दिर र दशंै घरमासमे त वलि दिने गरिन्छ । पौ राणिक शास् त्रअनुसार ने पालमा शक्तिपठी ५१ वटा रहे का छन् तर आजभो लि ५२ शक्तिपीठ हुन भन्ने कुराहरु पनि आउने गरे का छन् । जे हो स् पौ राणिक शास् त्रले सतीदे वीको अंग पतन भएको स् थानलाई शक्तिपीठ मानिदै आएको छ । तर मानव समाजको विकास र ने पालमा भुरे –टाकुरे राजाहरुको पालामा बिभिन्न अवसरमा स् थापना गरिएका दे वीका मन्दिरहरु पनि कतिपय जिल्लामा शक्तिपीठकै रुपमा मान्दै आएको पाइन्छ । ती सबै शक्तिपीठमा दशै ं पर्वको अवसरमा पूजाआजा र पशुपंक्षीहरुको बलि दिने गरिन्छ । शक्तिकी दे वीलाई वलि नदिदा खुशी हुन्नन् भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । तर वास् तवमा दशै ंपर्व मनाउने हरुले बलि शब्दको भावपूर्ण अर्थ नबुझे को आभास पै दा हुन्छ । बलि शब्दको अर्थ हो अर्पण गर्नु अथवा चढाउनु वा उपहार दिनु । रा“गो रुपी– क्रो ध, भे डारुपी– मो ह बो कारुपी– कामबासना अर्थात काम, क्रो ध र बासनालाई अर्पण गर्नु, चढाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो शास् त्रको भाव हो  । तर हामीहरुले वलि भने पछि पशुहरुलाई काटे र बलि दिने गरिन्छ । यसको बारे मा दशै ं पर्व मनाउने हरुले सो च्न जरुरी छ ।
महिषासुर र चण्ड, मुण्ड दै त्यहरुलाई दुर्गा भवानीदे वीले नाश गरे को तथा मर्यादा पुरुषो त्तम रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरे को सन्दर्भस“ग जो डे र मनाउने दशै वलीप्रथाको सबै भन्दा ठूलो ताण्डवनृत्य मञ्चन गरिने समय हो  । असुर शक्तिमाथि सुर शक्तिको विजयको प्रतीकात्मक अर्थबो ध गर्न दशंै मा निधारभरि रातो अक्षता र कानमा झप्प परे को पहे ंलो जमरा लाउनुअघि घरआ“गनदे खि मन्दिर, शक्तिपीठ, को तका परिसरमा रगतको खो लो बग्ने गरी पशुपंक्षीको बलि चढाउ“छौ ं । हामी सांस् कृतिक निरन्तरताका नाममा हिंसात्मक प्रथाको प्रचलन ल्याएका छांै  । तर बिडम्बना हामीले कहिल्यै आफूभित्रको महिषासुर प्रवृत्तिको हत्या गनेर् अठो ट गरे नौ ं । बरु महिषासुर बधको सुखानुभूतिले पग्लिन अबो ध, निरीह, निरुपाय र निदोर् ष प्राणीको निर्मम हत्या गरिरहयौ ं, गरिरहे का छौ ं । रा“गा, बो का, भे डा, हा“स र कुखुराको पञ्चवलिले सिञ्चिएको पत्थरको मूर्तिबाट महिषासुर प्रवृत्तिका असुरतत्वहरु नाश हुन्छन् भन्ने मान्यतामा हामी यो गदैर् आएका छौ ं ।
हाम्रा चाडवाड धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक बै भव र संस्कारको निरन्तरताका लागि हुन् । त्यसो त जुनसुकै चाडवाड अपनत्व र पहिचानसग प्रत्यक्ष रुपमा जो डिएका हुन्छन् । चाडवाडको सम्बन्ध र निरन्तरताप्रति सबै को चासो हुनुपर्छ । तर निरीह रागा, निख्खर कालो बो का, कागे भे डा, नीलटाउके हास र रातो भाले कदापि असुर हुन सक्दै नन् । जसका कारण तिनीहरुलाई पत्थरका दे वताअघि पछार्नु परोस् । ती अबो ध जनवारमाथि हुने निर्मम व्यवहार र निर्दयी बध चाडवाड, मे ला, उत्सव र महो त्सवको पावनताका बे ला मञ्चन गरिने पासविकताको पराकाष्ठा हो भन्दा अनुपयुक्त नहो ला । पशुवलि दिने परम्परा कहिले दे खि बस् यो भन्ने ऐतिहासिक अभिले ख छै न । तर हिन्दू धर्मशास् त्रको गहिरो ज्ञान भएका विज्ञहरुको बुझाइमा बलि भने को नै वे द बलि मात्रै हो  । वे दमा विद्यावारिधि गर्नुभएका स्व.डा. स्वामी प्रपन्नाचार्यले पनि बलि भने को नै वे द अर्पण गनेर् मात्रै भन्दै आउनुभएको थियो  । तर हामीकहा“ त वलिप्रथालाई स् थापित गराउन यसलाई धार्मिक ले पन लगाउने गरिन्छ । सबै भन्दा ठूलो परिमाणमा वलि दिइने शक्तिरुपा दुर्गाको नाममा वलि दिने वा चढाउने कुनै हिंस्रक संस् कार मूल वे दबाट निदेर् शित छै न, न त चण्डीमा पनि कही कतै दुर्गा भवानीलाई वलिसग जो डे र व्याख्या गरिएको छै न । दुर्गा त एउटा मिसनका लागि लक्ष्मी, सरस् वती र पार्वतीको एकीकृत शक्ति रुप मात्र थिइन् भन्ने कुरा धर्मशास् त्रका विद्वानहरुले बताउछन् ।
पछिल्लो समयमा अहिले बलिप्रथाको विरो धका आवाजहरु पनि आउने गरे का छन । पशुहरुको बलि नदिएर दशै ं पर्व मनाउने हरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो प्रथाको बारे मा अहिले समाजमा बहसको विषय बने को छ । शास् त्रमा उल्ले ख भए अनुसार भगवान रामले यसै दिन रावणको वध गरे का थिए । यसलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रुपमा हिन्दूहरुले विजया दशमी पर्व मनाउने प्रचलन रह“दै आएको छ । प्राचीनकालमा राजाहरु यस दिन विजयको प्रार्थना गरे र रण–यात्राको लागि प्रस् थान गर्दथे भन्ने भनाइ छ । यस दिन ठाउ“–ठाउ“मा मे लाहरु लाग्ने गर्दछ । अहिले पनि भारतमा रामलीलाको आयो जन हुन्छ । रावणको विशाल पुतला बनाएर जलाइन्छ । विजयादशमी भगवान रामको विजयको रुपमा मनाइने पर्व हो  । दशै पर्वले दश प्रकारका पापहरु काम, क्रो ध, लो भ, मो ह मद, मत्सर, अहंकार, आलस् य, हिंसाको अन्त्य गर्नु पनि हो  ।
बलि प्रथाको बारे मा अध्ययन गर्दा ने पालमा भुरे टाकुरे शासकहरुकै पालामा लडाइ लड्दा हो स् वा विजय प्राप्त गर्दा हो स् दे वीकै शक्तिले जीत भएको माने र को ट, मौ ला, हतियार र दे वीको मूर्तिमा बलि चढाउने परम्पराको थालनी भएको थियो  । शाह वंशको इतिहास हे नेर् हो भने लमजुङका घले राजालाई अपदस् त गराएर यशो ब्रह्म शाहलाई लमजुङको राजा बनाउदा वि.सं. १५५० मा कालिकाको मन्दिर बनाई रा“गा, बो का, भे डा, कुखुरा, हा“स, परे वा गरी १९ वटा पशुपंक्षीको बलि चढाएर राजाले दे वीस“ग शक्ति मागे को इतिहास छ ।
शाह राजाहरुले पछिका दिनमा पनि ठाउ–ठाउमा दे वी दे वताका मन्दिर बनाउन लगाएर राज्यकै तर्फबाट पूजाआजा चलाउ“दै आएका थिए । अहिले समाजमा अहिंसावादीहरुले पशुवलिको बिरो ध गदैर् आए पनि राज्यले समे त यो बलि प्रथालाई रो क्ने तर्फ लागे को छै न । दशै ं पर्वमा वलि प्रथा रो क्नुको सट्टा झन मौ लाउ“दै गएको कुरा बलिप्रथा बिरो धीहरु बताउछन् । धर्मको नाममा वलि दिने हरुलाई चे तना दिने हरुको संख्या र संघ÷संस् था बढ््न थाले का छन् ।
दशै ंका सुन्दर पक्षस“गै के ही नकरात्मक पक्ष पनि छन् । दशै ंलाई सांस् कृतिक पर्वका रुपमा लिनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा दशै ं पर्वमा विशे ष गरी युवा समुदायले मापसे लाई बढ्ता महत्व दिएको पाइन्छ । ठाउ“–ठाउ“मा झगडाका समाचारहरु पनि दशै ंको बे ला सुन्नमा आउने गर्दछ न् । घा“टी हे रे र हा“ड निल्नुपर्छ भन्ने उखानको विपरीत गएर दे खासिकीमा दशै ं पर्व मनाउ“दा निकै सामाजिक समस् याहरु दे खा पनेर् गर्छन् । जहा दशंै को ऋण तिर्न नसके र विदे शिनुपनेर् र खे तवारी बे चे र साउको ऋण तिर्नुपनेर् अवस् था पनि समाजमा नै दे खिने गरे को छ । तर पनि दशै पर्वमा सामाजिक रुपमा सकारात्मक पक्ष पनि छन् । वषांैर् दे खि टाढिएर बसे का परिवारजनको एक साथ भे ट हुने , सुख दुःखको साटफे र हुने अर्थमा दशै ं पर्वको आफ्नै महत्व छ ।
यो २०७५ सालको विजया दशमीले सबै लाई खर्चिलो नबनाई आफ्नो संस् कृतिलाई बचाउदै दशंै पर्व मनाउन सिकाओ स्, सबै को घर आगनमा सुख, शान्ति, समृद्धि र ज्ञानको ज्यो ति बलिरहुन् साथै नया“ ने पालमा उत्तरो त्तर प्रगति, मे लमिलाप र सुशासन कायम हो स् भनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ ।
Previous: आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा
Next: त्रिभुजीय शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ